Kumgangatho weMicimbi eprintiweyo, ezi zinto kufuneka ziQatshelwe
Intshayelelo: Umba oprintiweyo kukubonisa ixabiso lawo kumphezulu wokubhaliweyo kunye nokuprintwa kokubhaliweyo, ukukhanya kumphezulu womcimbi oshicilelweyo osalelwe umaleko wokutyabeka ongenambala ongenanto, emva kokulinganisa, ukomisa umphezulu womcimbi oshicilelweyo ukwenza into ebhityileyo iyunifomu ibala ebonakalayo ...
Ngaba uyazi ukuba ungawuphucula njani uMgangatho wokuPrinta ngeBhokisi yeMibala?
Intshayelelo: Umfanekiso wangaphandle wempahla kukhuphiswano olunobukrakra lweemarike iya isiba ngakumbi nangakumbi ngokubaluleka, ibhokisi yemibala ngenxa yodidi oluphezulu, olucekeceke, oluhle lube lolona khetho lufanelekileyo kumfanekiso wangaphandle wempahla yokupakisha, ibhokisi yemibala ayisiyiyo kuphela ukukhanya , kulula ukuyiphatha, i-rang ebanzi ...
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo kubuhle bokucinga ngokuPakisha?
Abstract: Kuyilo lopakisho lwentengiso, ubuhle bobugcisa kunye nobuhle obusebenzayo bokuyilwa kwephakheji kufanele ukuba bubudlelwane obumanyeneyo bendalo, ubuhle bokusebenza sisiseko kunye nesiseko sobuhle bobugcisa, ubuhle bezobugcisa bujike nobuhle obusebenzayo. Eli phepha lichaza ubudlelwane ...
Ukusuka kukhetho lwezinto ukuya ekuprintweni ukuya kwimveliso egqityiweyo, yile ndlela kuncipha ngayo iileyibhile zefilimu
Intshayelelo: Ukulungelelaniswa kwelebheli yefilimu eyomeleleyo kakhulu. Inokuhonjiswa ngeplastiki, ngentsimbi, ngeglasi kunye nezinye izikhongozeli zokupakisha. Shicilela ileyibheli yomkhono wefilimu ithandwa ngakumbi kwimarike kuba inokudibanisa iipateni ezikumgangatho ophezulu kunye neemilo ezahlukileyo. Eli nqaku labelana ...
Wazi ntoni malunga nezongezelelo ze-inki eziqhelekileyo?
Ngenxa yomahluko omkhulu kubushushu bendawo yokushicilela kunye nokufuma, iimeko zenkqubo yeepropathi ezahlukeneyo kunye nokuprintwa, uhlobo ngalunye lwe-inki pigment, ikhonkco elisetyenziswe kwinani lezinto kunye nezinto zokugcwalisa ziphantse zahlala zikhona, ukuba akunako ukuhlangabezana nemfuno t ...
Amanqaku-amathathu ashushu Ukunyathela uMgangatho woLawulo loMgangatho kunye neZiphene Unyango
Ngaba uyayiqonda iTekhnoloji yokuPrinta yokuChasene nomgunyathi weeleyibhile zesitikha?
Inkqubo yokuPrinta ye-UV Frosted kunye nokuSombulula ingxaki
Isikhokelo: bobabini abavelisi kunye nabasebenzisi bahlawula ngakumbi nangakumbi kupakisho lwangaphandle lweemveliso, kunye neemfuno zentengiso ezahlukeneyo zokupakisha okuphezulu kunye nokupakisha okwenziwe ngabantu kuyakhula. Xa imveliso post-cofa iimveliso, UV yoshicilelo frosted iye yatsala ingqalelo enkulu u ...
Nika ingqalelo kwimiba emi-6, Fumana umphumo oshushu weSitampu sokuSebenza
Abstract: Inkqubo yokunyathela okushushu iyathandwa ngabantu ngenxa yomphumo wayo wokuhombisa umphezulu. Ukusuka kwinkqubo esisiseko yokunyathela okushushu, kunokubonwa ukuba ukuze kufumaneke isiphumo sokunyathela eshushu eshushu, ubushushu bokunyathela okushushu, uxinzelelo olushushu lokunyathela, isantya sokunyathela eshushu kunye nenye inkqubo ...
Inkqubo Injengokubengezela ye-UV, ukwenzela ukuba ukupakisha kulunge ngakumbi
Isikhokelo: i-UV ye-glazing yendawo inokuba ngokweemfuno ze-glazing product, uphawu lwentengiso, ukupakisha kunye nokuprinta kufuneka kugxininise iinxalenye zokwaleka kwendawo, iipateni zokugaya xa kuthelekiswa neepateni ezijikelezileyo zibonakala ziqaqambile, ziqaqambile, zinamacala amathathu, zinokuvelisa igcisa elilodwa ...
UKUFUNDA SIMAHLA 0086-18850140115
I-logo eprintiweyo yokuprinta umbala wekhofi i-350g iphepha elimhlophe ibhokisi yangaphandle